बलदेवको दुःख (व्यङ्ग्य) | NepaleKhabar.com
बलदेवको दुःख (व्यङ्ग्य)
July 4, 2017 | 9:42 pm
योगीशकृष्ण : आज बलदेवको फोन दिउँसो आयो । आवाज मधुरो थियो । पहिले जस्तो फूर्ति थिएन ।
सोधेँ “चुनावमा टिकट नपाउने भयौ कि कसो ? ”
“टिकट उसले पाउँदैछ जसले १० कठ्ठा खेतमा दाउमा लगाउने भयो । म दुई कठ्ठाभन्दा बढी दाउमा लगाउने पक्षमा थिइँन । ”
उसलाई के गरी सान्तवना दिउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ , उसले भन्यो “केही छैन , आर्को चानस पनि त आउँछ । नेपाल न हो , एकआध वर्षमा फेरि चुनाव हुन पनि सक्छ । संविधानसभाको चुनाव त दुई पटक भयो , यो त स्थानीय न हो । जति पटक गरे पनि हुन्छ ।”
उसको मसिनो स्वर सुनेर मैले भने “दुःख नमान । उमेर छ , फेरि पनि समय आउँछ । ”
“हे दाजु , टिकट नपाएकोले दुःख भएको छैन । शरीरमा अलि अलि चोट लागेको छ । ”
“के भयो ?”
“ के भएन ? त्यो सोध्नूस् न । यो बलदेव पहलमान् नभएको भए आज शायदै जिन्दा हुन्थ्यो । मरेको भए त मलाई सरकारले निर्वाचन शहीद घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हा हा हा । सरकारको दश लाख जोगियो । एक प्रकारले मान्नूस कि बलदेवले सरकारलाई १० लाख दियो । यति त मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि अनिवार्यबाहेक कर तिरेको छैन होला । ”
मलाई उसको चिन्ता लाग्यो “हैन , भयो के ? त्यो बताउन पहिले ।”
“खास केही छैन । देहमा दुई चार घाउ खरोँच लागेको छ ।”
मलाई छटपटि भइरहेको थियो –बलदेव कुनै जोखिममा त परेन ।
“खास केही छैन , दाजु ” उसले भन्यो “धेरै वर्षदेखि लोकल इलेक्सन भएको थिएन । सोँचे , चुनाव हेर्न जान्छु । एक नम्बर प्रदेश गयो भने ससुरालीयात्रा पनि हुन्छ , चुनावको तामझाम पनि हेरिहाल्छु । ”
“हेर्नुस् न” उसले चुनावी लीला सुनाउन थाल्यो “ मेुरो जेठान जो छ ऊ छ –पुच्छर पार्टीमा । दिल्लीदेखि लैनचउरसम्म , लाजिम्पाटदेखि कोटेश्वरसम्म यो पार्टी पुच्छर हल्लाउँदै हिँडछ । उता चचिया ससुरको छोराको अर्कै फूर्ति छ । ”
“कस्तो फुर्ति ?”
“ऊ छ स्याल पार्टीमा । कहाँ कसलाई के भनेर जुधाउने हो सँधै त्यही फिराकमा रहन्छ । एक पटक भन्छ –यी अवसरवादी हो । भोलि पल्ट भन्छ कि तिमीसँग लभ परेको छ । पर्सीपल्ट भन्छ कि तिमी मेरो माइती हो । स्याल जस्तै धूर्त छ ।”
“मेरो त थाहै छ दाजु , तिमीलाई । म त सदाको बगुला पार्टीको समर्थक । बगुलालाई भगत पनि भन्छ । लाग्छ कि जनताको हितमा ध्यान गरिरहेछ । ध्यान त खास उसको सत्ताको माछाको लागि रहन्छ । कहिले प्रतिगमन सच्चिएको चारा फ्याँक्छ त कहिले राष्ट्रिय आवश्यकताको । ”
मैले केही भनिँन । हाँसे मात्र । ऊ भन्दै गयो “चारखुट्टेको तडकभडक त अर्कै छ । जहाँ देख्छ सत्ताको साँढे त्यही गएर हत्त न पत्त चर्न थालिहाल्छ । उता काग पार्टी त खालि मौकाको ताकमा रहन्छ – कसैले नदेख्ने गरी खाइहालुँ । यस्तो माहौलमा म चुनाव प्रचारमा पहिले जेठानसँग पछि लागेँ । जसरी उसको नेता लाजिम्पाट त कोटेश्वर, लैनचउर त द्वारिका होटल चाहर्छ , त्यसैगरी यो नेता त घरि ऊ नेताको घर घर दौडिन्थ्यो । उसको यो कर्तुतको बारेमा बुझ्दा थाहा भो कि –स्याल पार्टीसँग उसको तालमेल छ । रे बाबा रे । स्याल पार्टीले पुच्छरलाई दुश्मन भन्थ्यो , यहाँ तालमेल भएको छ । ”
“चुनावमा पार्टीबीच तालमेल त भइहाल्छ नि । ”मैले उसलाई सम्झाउने प्रयास गरेँ ।
“त्यो त म पनि बुझ्दछु कि तालमेल हुन्छ । यहाँ त विचित्रको कुरा भयो अनि मैले मार खाएँ कि ।”
“जेठानको पार्टीको प्रचार गर्ने भएपछिे स्याल पार्टी र पुच्छर पार्टीको दुवैको झण्डा बोकेँर हिँडे । आर्को टोलमा पुगेपछि एक हुल केटाहरूले मलाई समातेर स्याल पार्टीको झण्डा फ्याँक भनेर मलाई धम्काए । म पनि त पहलमान् हुँ कि । किन डराउँनेवाला थिएँ –यस्तंै तालमेल भएको छ । यस्तो तालमेलको हामी विरोधी हौँ भन्दै मलाई स्याल पार्टी मुर्दावाद भन्ने नारा लगाउँदै फर्किन आदेश दिए । आदेशसँगसँगै दुई चार मुक्का लगाए । मन त थियो , दुई चार जनालाई धोवीपछाड लगाइदिऊँ । पछि सोचेँ ससुराल आएको मानिस के लफडा मोल लिनु । ”
“अनि के भो त ? ”
तिनीहरूले मलाई भने कि स्याल पार्टीको झण्डा फेक्नु , पुच्छर पार्टी जिन्दावाद स्याल पार्टी मुर्दावाद भन्दै हिँडनू। मैले त्यसै गरेँ । आर्को टोलमा पुगेपछि अर्कै आपद आइलाग्यो ।”
यहाँ स्याल पार्टीका केटाहरूले मलाई घेर्दै भने – त धोकेबाज होस् । गद्दार होस् । हाम्रो पार्टीलाई मुर्दावाद भन्ने । उनीहरूले यहाँ पनि दुई चार मुक्का लगाइदियो । तिनीहरुले मेरो झण्डा भाँचिदिए । मन त थियो दुई चार जनालाइ चित पारिदिँऊ । सोचेँ ससुराल आएको मानिस के लफडामा पर्नु ? उनीहरूले भने कि स्याल पार्टीबाहेक सबलाई मुर्दावाद भन्दै जानू । मरता क्या न कर्ता । म नारा लगाउँदै आर्को वडातिर लागे । यहाँको हालत त झन खराब थियो । ”
“कस्तो खराब ।”
यो वडामा स्थानीय तालमेल थियो । काग र बगुला पार्टी एक तरफ । सब पार्टी एक तरफ । मेरो नारा सुन्नासाथ सब पार्टीमा मानिसले मलाई घेरिहाले । सबले मिलेर मलाई । अब के भन्नु दाजु आफै बुझिहाल । मन त थियो कि दुई चार जनालाई दे पटकन दे पटकन गरिदिऊँ । ससुराल आएको मानिस किन झगडा झन्झट गरूँ । आह । मुखमा पनि चोट लागेको छ । धेरै बेर बोल्न सक्दिन ।”
बलदेवले फोन राख्यो । अचानक मैले आफूलाई बलदेव भएको महसुस गरेँ । यो बलदेवै बलदेवको देश त हो ।